Nezvedu - Guangzhou Naiwei Robhoti Technology Co, Ltd.
Guangzhou Naiwei Robot Technology Co, Ltd., yakagadzwa muna Kukadzi 18, 2020, Yakamutangira yaive Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co, Ltd.
Fekitari yemahofisi makuru
Nha. 2 fekitori yebazi
Kambani yakavhenganiswa pamwe chete uye yakasimbiswa neSainzi neTekinoroji Dhipatimendi reGuangdong Province, Science uye Technology Bureau uye Guangzhou Baiyun District Government. Tine rakasimba R & D timu, 1 Ph.D, 2 yenyika vakuru mainjiniya, mashanu masters, uye vangangoita makumi mashanu enjiniya vashandi vane bachelor degree, inovhara huwandu hweraser, michina, zvemagetsi, magetsi, hydraulic, software, visual tekinoroji R&D nekushandisa kusangana.
Chinangwa chedu chekutanga kuburitsa yekumhanyisa masiki muchina kusangana nekukurumidza kudiwa kwemhuri nekunze kwemusika. Nebudiriro inokurumidza, ikozvino isu tine vashandi vanopfuura mazana matanhatu. Iyo nzvimbo yemiti inodarika zviuru gumi nezvitanhatu zvemamirimita.
Inowanikwa muSainzi & Technology Paki yeBaiyun, isu tiri kutarisa kune akangwara zvishongedzo, zvinosanganisira zvakasanganiswa majoini, ultrasonic zvishandiso, maski muchina uye zvine chekuita michina, yakatwasuka mizhinji-yakabatana marobhoti, 3D laser yekucheka muchina, akakosha uye asiri-akajairwa maindasitiri marobhoti, vanhu- robhoti kubatana marobhoti.
Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa zvinoenderana nematanho eEC, CCC, ISO 9001, uye gara uchiramba uchivandudza zviyero kuti uwane zvinodiwa nevatengi. Isu tinoseta timu yebasa, kuti tikurumidze uye nemazvo kugadzirisa mhando dzese dzemibvunzo nezvinetso kubva kune vatengi.
Zvigadzirwa zvedu zvinovimbwa nevatengi vanobva pasirese pasirese, zvinobuda pamwedzi zvinosvika 1000 seti. Yekumhanya kumwe kudhonza imwe servo mota maski muchina, yakagadzikana kumhanya, yemakwikwi mutengo, inorumbidzwa zvikuru nevatengi vedu.